सकियो प्रचण्ड समुहको बैठक,ओली विरुद्ध चाल्ने भए यस्तो कदम ! - Prahar News
सकियो प्रचण्ड समुहको बैठक,ओली विरुद्ध चाल्ने भए यस्तो कदम !
काठमाडौं -नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको बैठकमा संसद् विघटनको प्रस्ताव र त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटन गर्ने प्रस्तावविरुद्ध राजनीतिक र संवैधानिक कदम चाल्ने निर्णय भएको झलनाथ खनालले जानकारी दिए । बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्ड, नेताहरु माधव नेपाल, खनालसहितका नेताहरु सहभागी थिए ।
प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताहरुको बैठक सकिएको छ । प्रचण्डनिवास खुमलटारमा बसेको बैठकमा संसद् विघटनको प्रस्ताव र त्यसपछि उत्पन्न हुनसक्ने परिस्थितिबारे छलफल भएको थियो ।
के भन्छन बिज्ञ
राष्ट्रियसभा सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद विघटन गर्ने छुट नदिएको बताएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले संसद विघटन गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि प्रतिक्रिया दिँदै उनले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने छुट नदिएको बताएका हुन् ।
संविधानले संसदले सरकार नै बनाउन नसकेको अवस्था भएमा विघटन हुनसक्ने कल्पना गरेको भन्दै उनले नेपाल कम्युनिस्ट पाटी एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने बेलामा संसद विघटन संविधानविपरीत र अवैध हुने बताएका हुन् ।
‘अहिले नेकपाको सरकार बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नै भएन’ उनले भने ‘यो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न खोजेको हो भने असंवैधानिक छ ।’
सांसद अधिकारीले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नुअघि संसदमा रहेका अन्य दल र संविधानका जानकारहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने बताए ।
मेरो विचारमा राष्ट्रपतिले संसदमा रहेको मुख्य पार्टीसँग सबै पार्टीसँग छलफल गर्नुपर्ने हो । संवैधानिक व्यक्तित्वसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्छ’ उनले भने ।
यदि राष्ट्रपतिले संसद विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गरेमा अर्को असंवैधानिक कामलाई मान्यता दिएके ठहर्ने अधिकारीले बताए । राष्ट्रपतिबाट पनि स्वीकृत भएमा यो विषय सर्वोच्च अदालत पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
सर्वोच्च पुगेमा सर्वोच्चले संविधानको आधारमा मात्र नभई अन्य राजनीतिक दलहरु चुनावमा जान तयार छन् कि छैनन् भन्ने समेतलाई ख्याल गरेर निर्णय दिन सक्ने अधिकारी बताउँछन्
कसले भन्यो गैरसंवैधानिक
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता गोकुल बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको प्रस्तावलाई गैरसंवैधानिक भन्ने कानुन व्यावसायीमाथि प्रश्न गरेका छन् । पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका बाँस्कोटाले संसद् विघटनको प्रस्तावलाई गैरसंवैधानिक भन्नेमाथि प्रश्न गरेका हुन् ।
बाँस्कोटाले संविधानलाई उल्लेख गर्दै भने, “धारा ७६ ले सरकार गठनको व्यवस्था गरेको छ । जसमा पहिलो बुँदामा बुहमत प्राप्त दलको नेता प्रधामन्त्री हुने, दोस्रोमा बहुमत कसैको नआएमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले जसलाई पत्याउँछ त्यो प्रधानमन्त्री हुन्छ ।”
बाँस्कोटाका अनुसार त्यो अवस्था पनि नभएमा त्यो सरकारले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । विश्वासको मत प्राप्त भएन भने ६ महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीले चुनाव गराउनुपर्ने उल्लेख रहेको दाबी गरे ।
कुनै पनि दलको बहुमत नआए र दल मिलेन भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई मनोनित गर्नसक्ने बास्कोटा बताउँछन् । त्यो पनि भएन भने त्यसले पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने र विश्वासको मत लिन नसकेमा पनि चुनावमा जान सकिने उनको तर्क छ ।
तर धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको आयूको कुरा गरेको तर अगावै विघटन भएमा अवस्थामा बोहक भनिएको भन्दै उनले भने,“अगावै विघटन भनिएकोले अगावै विघटन गर्न सकिने भने नि त । त्यसैले कसले भन्यो गैरसंवैधानिक भनेर रु उनीहरुले पहिले राम्रोसँग संविधान अध्ययन गरुन् ।”
आइतवार, पौष ५ २०७७०१:२४:४६
प्रथम अध्यक्ष र महासचिव भएको पार्टी नै आधिकारिक हुन्छ : सुवास नेम्बाङ
ओलीकै पक्षमा उभियो निर्वाचन आयोग, दाहाल समुहको आग्रह ठाडै अस्वीकार !